Gollaha Baarlamaanka oo kulmaya iyo Cabsi laga dareemayo Suuqa Bakaaraha | raascasayrmedia.com
← War deg deg ah: Cumar C/rashiid oo gaashaanka u duruurey go’aankii Madaxweyne Sheikh Shariif
Ciidamo Somali ah oo ay Weheliyaan kuwo Itoobiyaan ah oo Xalay qabsadey Ceelbarde →
May 18, 2010 · 2:52 pm
Gollaha Baarlamaanka oo kulmaya iyo Cabsi laga dareemayo Suuqa Bakaaraha
War goor dhoweyd soo baxay ayaa sheegaya in kalfadhi uu baarlamaanka ku yeelan doono Xarunta Golaha Shacabka, iyadoo saameynta kulankan laga dareemay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Kulanka Baarlamaanka ayaa la ogeyn waxa looga hadli doono, waxaana la dhowrayaa in kulanka uu shir gudoomiyo Gudoomiyihii KMG ee dhowaan ay doorteen Xildhibaanada, kaasoo ah xildhibaanka ugu da’da weyn. Kulankaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay yeeshaan ka gadaal is casilaadii Gudooymihii hore Aadam Madoobe
Dhanka kale, Suuqa Bakaaraha ayaa goor dhow waxaa ka bilaabatay cabsi ku aadan kulanka baarlamaanka, iyadoo si tartiib tariib albaabada la isugu laabay goobaha ganacsi ee saaka sida caadiga ku furmay.
Dadka reer Muqdisho ayaa lama filaan ku noqotay Kulanka Baarlamaanka, iyadoo wali dadka ay yihiin kuwo dhegahooda ka guuxeyso tii dhacday maalinimadii axadii oo fadhigii baarlamaanka horseeday geeri fara badan.
Wixii ku soo kordho kala soco wararkeena dambe
Hoyga wararka Somaliyed